Kedu ka Nnukwu data nchịkọta siworo bụrụ ihe dị mkpa maka DSP | Martech Zone
Nnukwu data nchịkọta abụrụla isi nkuku maka atụmatụ azụmaahịa dị irè na adtech kemgbe ọtụtụ afọ ugbu a. Site na ọnụọgụ iji kwado echiche nke nnukwu nchịkọta data 'arụmọrụ, ọ bụ ụzọ dị mfe iji gwaa ụlọ ọrụ gị, ọ ga-abụrịrị na ọ ga-eme ka ị maa mma maka ịbụ onye tụrụ aro ya.
Nnukwu data nchịkọta na-enyocha nnukwu data data (dị ka aha nwere ike ịpụta) ma na-enye ndị nyocha ohere iji data ahụ chọta usoro, usoro ahịa na mmasị igwe mmadụ na omume onye ọrụ. I tinye data ahụ n'ọrụ site na ikwe ka ọ duzie nhọrọ azụmaahịa amaara ama. Ọ na-ewere nnukwu ozi ma na-etinye ha n'ime obere mkpebi ndị na-eme n'oge na-egosi na ọ bara nnukwu uru na ụdị azụmaahịa niile gburugburu ụwa.
Nchọpụta Achọrọ-Akụkụ (DSPs), kwenye ya ma ọ bụ na ọ bụghị, jikwaa ị nweta nnukwu uru site na ịrị elu nke nnukwu data nchịkọta, na ebe a bụ ihe kpatara ya:
Mee Mkpebi Ndị Mara Ihe
A DSP bụ ụzọ iji mee ka usoro ịzụ ahịa mgbasa ozi dị ngwa ngwa ma dị mma maka otu interface.
Dị ka akụkụ nke ọchịchọ yinye na ọkọnọ na choro usoro akụ na ụba - DSP na-erite uru site na ohere ndị nnukwu data gosipụtara nchịkọta site n'itinye uru n'ihe ọmụma ha na-enweta.
Na usoro nke onye nkịtị, DSP nwere ike gbakọta ngwa ngwa, ahịa niile nke ohere mgbasa ozi na otu interface. Nke a na-enye ụlọ ọrụ ma ọ bụ ndị na-azụ ahịa ohere ikpebi ebe ha ga-azụta ohere mgbasa maka mgbasa ozi ọzọ ha. Top DSP na-eji algorithms pụrụ iche n'ihe gbasara milliseconds iji nye ndị mgbasa ozi ohere ịchọta azụmahịa kachasị elu.
Ọgbọ ọzọ nchịkọta engines dị ka Nkịtị ịhụ na mfe usoro site ike boosting na nchịkọta na-arụ ọrụ n'ụzọ dị oke egwu, na-ekwe ka ndị sayensị data na ndị nyocha chịkọta ozi dị mkpa ngwa ngwa o kwere mee n'ogo data buru ibu. Igwe ndị dị otu a na-ebelata njirisi ajụjụ gbara ajụjụ siri ike dị na nnukwu datasets, na-enye ndị ọkà mmụta sayensị ohere ịbawanye uru, chọpụta ụdị data ngwa ngwa ma debe ụdị ndị ahụ ngwa ngwa. Mgbe ihe nlere ahụ dị mma, ihe kwesịrị ekwesị dị mma maka onye ọrụ, ọnụahịa bidoro dị elu, ọnụ ahịa dị elu na-eme ka ọnụego mmeri / mmeri rịa elu.
Ebumnuche niile nke ire ere bụ ịbawanye uru ụlọ ọrụ gị site na ịba ụba ahịa yana nke ahụ bụ oke data nchịkọta rụọ ọrụ n'otu na DSP. Site na ichota nke ọma site na nnukwu data nke data, ị na-ekwe ka njikarịcha ahịa na-aga n'ihu. Na nke a, ị naghị atụfu ihe na mgbidi na-eche ka ị hụ ihe dị na ya, ị na-eme mkpebi ịmara nke ọma iji data iji kwado ya.
Ọ na-achọ nkà nyocha nke ọma iji kpochapụ ọtụtụ data na teknụzụ. Mgbe ụfọdụ, ntakịrị data ị chọrọ iji mee ka atụmatụ ahịa gị kachasị mma bụ agịga na haystack. Site na iji ọrụ nke DSP, ndị ahịa na / ma ọ bụ ụlọ ọrụ na-enwe ike itinye onwe ha na ohere kachasị mma, na-ekwe nkwa nloghachi kachasị mma n'akụkụ ịkwụ ụgwọ pennies na dollar iji zụta ohere mgbasa ozi. DSP na-enweta nnukwu uru site na itinye data buru ibu n'ime algọridim ya, na-eme ka ọ bụrụ ire ere dabere na ọnụọgụ ndị ahịa.
Jiri Nọmba ahụ Mee Ihe
Nnukwu data nyocha bụ ụzọ siri ike ịnyagharịa na nke ya onwe ya. Site na ntoputa ya na ihe ohuru ohuru ya na ahia ahia, DSP nwere ike irite uru site na data a site na ichikota ya na algorithms ya. Site na ịnwe data buru ibu ị ga-anọdụ ala, DSPs bara uru ugbu a na nke ugbu a site na ikpokọta ọtụtụ ozi ma gbasasịa ya n'ụzọ kwesịrị ekwesị maka ụlọ ahịa na ụlọ ọrụ mgbasa ozi.
Dịka ọmụmaatụ, nnukwu data ga-enye nọmba maka otu igwe mmadụ, ndị DSP ga-agbakọkwa ya n'ụzọ kwesịrị ekwesị. Site na nyocha nke ihe omuma ndi ozo na-achikota, data buru ibu nchịkọta na-enye anyị ohere ịjụ ajụjụ, na-enweta ozi bara uru. Ndị Mgbasa Ozi Na-achọ-Akụkụ (DSAs) ga-eji nke a, wee nye ụlọ ọrụ ụzọ dị mma maka itinye ọkwa mgbasa ozi. DSPs bụ otu n'ime ndị ọrụ enyemaka kasịnụ na ozi nnukwu nyocha data na-enye.
O siri ike ịchọpụta ndị na-erite uru na nsonaazụ nnukwu data nchịkọta. Kemgbe esi abanye ya na ụwa ahịa n'ọtụtụ, anyị ahụla ọtụtụ ndị enyemaka, mana ọ nweghị onye dị ka ndị na-eji DSP. Site n'iji ihe omuma enweta site na nnukwu data nchịkọta, DSPs abụrụla ngwaahịa ka mma maka ngalaba ahịa na ngalaba mgbasa ozi.
Ebumnuche niile nke ire ahịa bụ ime ka ụlọ ọrụ gị baa uru site na ịba ụba ahịa na nke ahụ bụ kpọmkwem otú nnukwu data nchịkọta rụọ ọrụ n'otu na DSP.
Site na iji ọrụ nke DSP, ndị otu azụmaahịa nwere ike itinye onwe ha na ohere kachasị mma, na-ekwe nkwa na kacha mma nloghachi na ego n'akụkụ ịkwụ ụgwọ pennies na dollar iji zụta ohere mgbasa
Obi abụọ adịghị ya, DSP na-enye ohere ka mma iji melite ROI na mgbasa ozi.
Tags: Analyticsnnukwu datannukwu nchịkọta datasayensị dataonye ọkà mmụta sayensị dataina akụkụ ikpo okwuNkejiebuli uruNkịtị
Philip Kushmaro, VP Operations na Ebube, amụrụ na Canada na Commodore 64 Guru nna nna na nna nke kpọrọ asị ihe niile dijitalụ, nke mere ka ọ bụrụ onye na-ahụghị ihe niile anya kama ọ nwere mmasị ịkọwa ya. Ọ bụ injinịa ngwanrọ, ọkachamara na IT nke Microsoft kwadoro, ọkachamara webmaster na ọtụtụ ndị ọzọ. Otu ụbọchị kpebiri ịhapụ ya niile iji gbasaa akụkụ okike ya. Ide banyere ihe ndị ọ kpọrọ asị kpọrọ asị aghọwo ihe ntụrụndụ. Mgbe ọ naghị ede blọgụ ma ọ bụ mee ihe ọ na-arụ maka ọrụ, ịnwere ike ịchọta ya na ọzụzụ mgbatị ahụ na MMA na Brazil Jiu Jitsu.
The History of Email na Email chepụta